Ukutshintsha iiTable kwi-2013
3 Iinkqubo ezisisiseko ngamnye Umsebenzisi wokuFikelela kufuneka azi
Iifayili ziyisiseko kuzo zonke iinkcukacha ezigcinwe kwi-Microsoft Access 2013. Njengesiqendu somsebenzi we-Excel, iithebhile zingaba zinkulu okanye zincinci; ziqulethe amagama, amanani kunye neeadesi; kwaye ziquka nemisebenzi emininzi eyenziwa yi-Microsoft Excel (ngaphandle kwezibalo). Idatha yicala, kodwa iitheyibhile ezingaphezulu kwiziko ledatha, kunzima kakhulu ukuba izakhiwo zedatha zibe.
Abalawuli beenkcukacha ezilungileyo bakulungiselela ulwazi lwabo, ngokwengxenye, ngokukopisha, ukuqamba kabusha kunye nokususa iitafile.
Ukukopisha Iitheyibhile kwi-Microsoft Access
Abaphuhlisi beenkcukacha basebenzisa i-copy-tables functionality kwi-Access ukuxhasa iimeko ezintathu ezahlukeneyo zokusetyenziswa. Enye indlela nje ikopisha isakhiwo esingenanto, ngaphandle kwedatha, inceda ekwakheni itafile entsha usebenzisa izicwangciso zeetafile ezikhoyo. Enye indlela yokusebenza njengokwenene "ikopi" - iqhubela phambili isakhiwo kunye nedatha. Inketho yesithathu igqithisa iitafile ezifakwe ngokufanayo ngokufaka iirekhodi kwitafile enye kwitafile ekhoyo. Zonke iindlela ezintathu zilandela inkqubo efanayo:
Ukucofa kwesokudla kwigama letafile kwiNqakra yokuHlola , uze ukhethe Kopisha . Ukuba itheyibhile iya kukopishwa kwelinye idatha okanye iphrojekthi, tshintshela kwi-database okanye iphrojekthi manje.
Chofoza kwakhona kwiNqakrazo lokuHlola kwaye ukhethe Namathisela .
Qamba itafile kwifestile entsha. Khetha ukusuka kwesinye sezigqibo ezintathu: Ulwakhiwo kuphela (iikopi kuphela kwisakhiwo, kubandakanywa izimo kunye nezitshixo eziphambili), Ulwakhiwo kunye neDatha (ikopi ifom epheleleyo) okanye Faka i-Append Data kwiTable ekhoyo (ikopi idatha ukusuka kwelinye itafile ukuya kwelinye kwaye idinga zombini iitafile zineenkalo ezifanayo).
Ukuqamba iifayile kwi-Microsoft Access
Ukuqamba kabusha itafile kulandela kwinkqubo enye, ecacileyo:
Chofoza iqhosha igama letafile ukuba libizwe kwakhona kwaye ukhethe Qamba kwakhona .
Faka igama elifunayo.
Cinezela Faka .
Ungadinga ukuhlola iimpahla ezifana nemibuzo, ifom kunye nezinye izinto ukuqinisekisa ukuba utshintsho lwegama lusetyenziswe ngokufanelekileyo kwi-database.
Ukufikelela kufakazela i-database yakho, kodwa imibuzo ekhunileyo, umzekelo, kungenzeka ukuba ingaguquki ngokuzenzakalelayo kwigama elitsha.
Ukususa iifayile kwi-Microsoft Access
Susa itafile usebenzisa enye yeendlela ezimbini:
Chofoza iqhosha igama letafile uze ukhethe Susa .
Khetha igama letafile ukuba lisuswe, kwaye cinezela iqhosha lokuCima .
Ukuze usebenzise ezi zinto ngaphandle kokulimaza ietafile ezikhoyo, khuphela ezinye iisampuli zolwazi kunye nokuvavanya uze ukhululeke usebenzise iitafile kwiziko elibalulekileyo kuwe.
Ukufikelela kweMicrosoft akuyona imeko yokuxolela impazamo yomsebenzisi wokugqibela. Cinga ukwenza ikopi yedatha yonke phambi kokuba usebenzise isakhiwo setafile yayo, ngoko unako "ukubuyisela" okokuqala ukuba wenze iphoso elingabonakaliyo.
Xa ususa itafile, ulwazi oluhambelana naloo tafile luyakususwa kwisiseko sedatha. Ngokuxhomekeke kwiintlobo ezahlukeneyo zeetable-level osibeke, ungaphula ngokungahambiyo ezinye izinto ze-database (njengefom, imibuzo okanye iingxelo) ezixhomekeke kwitafile oyitshintshileyo.
Indlela yokubala iiProbability ngeTable Standard Standard Distribution Table
Indlela yokongeza Umhla okanye iSitampu seXeshana kwiTable Database ye-2010
Inombolo e: 2.7182818284590452 ...
Indlela yokubuyisela i-Microsoft Access Database
Ulwabelwano oluqhelekileyo oluqhelekileyo?
Ukudala ubudlelwane kwi-Microsoft Access 2007
I-Hypothesis Test for the Difference of Two Population Proportions
Ziziphi iipati zePee?
Ulungelelaniso kunye neCosaus in Statistics
Ulwakhiwo lukaLuka Inkcazo kunye noMzekelo
Amahlaya amaRoyal Baby
Usuku lukaMama noMuttertag eJamani
I-Standard vs. Tipping Rain Gauges
Iingoma eziphezulu ezingama-40 zamaKristu zika-2015
Umbuzo weMfundi: Ndingayifumanisa njani na?
I-Macalester College i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
'Iintsuku Zobomi Bethu': Umhlobo Wentsapho KaBrady
Ukusinda kweMimoya -Simo: iingubo
Ufunyenwe kwiTape: Iimpawu eziphambili ezifunyenwe ziFilimu
Ukucacisa iFomam yeFramble Golf Tournament
Imbali ye-Circuit Integrated (Microchip)
Ndingayifunda njani iKhemistry?
IziFulentshi ze-Indefinite Adjectives - Adjectifs indéfinis
Amanqanaba okulinganisa kwizibalo
Inkcazo kunye neNkcazo